‘भाइरस रिमुभिङ कार्डले’ले कोरोना भगाउँछ भन्ने हल्ला चलेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले मुख खोल्यो, के हो यर्थाथ ? — Sanchar Kendra
‘भाइरस रिमुभिङ कार्डले’ले कोरोना भगाउँछ भन्ने हल्ला चलेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले मुख खोल्यो, के हो यर्थाथ ?
काठमाडौं । भाइरस रिमुभिङ कार्डले कोरोना भाग्छ भन्ने हल्ला चलेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले मुख खोलेको छ। मन्त्रालयले ‘भाइरस रिमुभिङ कार्ड’ले कोरोना भाइरस कोभिड-१९ को संक्रमणबाट नजोगाउन प्रष्ट पारेको छ । बरु यसले मुटु, फोक्सा लगायतमा अंगमा गम्भीर असर पार्नसक्ने चेतावनी दिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले हालसम्म कुनै किसिमको कोरोना बुटी पत्ता नलागेको भन्दै भ्रममा नपर्न आग्रह गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित लाइभ अपडेट मार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा जागेश्वर गोतमले कोरोना जन्तरले कोरोना सर्नबाट रोक्न नसक्ने बताएका हुन् ।
“हालै मात्र भाइरस रिमुभिङ कार्ड पत्ता लागेको र यो घाँटीमा झुन्ड्याएमा कोभिड रोग लाग्दैन भन्ने भ्रम सिर्जना भएको विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,” उनले भने, “यस किसिमको कुनै पनि कार्ड हालसम्म पत्ता लागेको छैन, यस किसिमको विधि र प्रक्रिया नै शुरु नभएको व्यहोरा सबैमा अनुरोध छ। यस्तो विधि भएको भए आज संसारभर यति धेरै कठिनाइ हुदैन थियो होला ।”
डा गौतमले कोरोना भगाउने यो विधिले वैधानिकता नपाएको पनि बताए । यदी सो उपायबाट कोरोना सर्नबाट बच्न सकिने भए सरकार आफैले उक्त विधिको शुरुवात गर्ने डा गौतमले बताए ।
उनले कोरोना महामारीको समयमा समस्या समाधानका लागि भन्दै भ्रम सिर्जना गर्न नहुने बताए । उनले कोरोना भाइरस रिमुभिङ कार्ड आयत गर्ने, बजारीकरण गर्ने र प्रचारबाजी गरीएको पाइएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले सो कार्डहरुलाई सरकारले स्वीकृती नदिएको बताए ।
डा गौतमले उक्त कार्डमा भएका रसायनले मुटु, फोक्सो, कलेजो लगायतका अंगहरुमा असर पुर्‍याउने र स्वास्थ्यमा गम्भिर असर पर्ने डा गौतमले बताए । स्वासथ्य मन्त्रालयले सो कार्ड प्रयोग नगर्न र नगराउँन आग्रह समेत गरेको छ । प्रवक्ता गौतमले विभिन्न भ्रम छर्दै आएको सुनिएको उल्लेख गर्दै सबै यसप्रति सचेत हुनसमेत आग्रह गरे ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को स्थायी कमिटी बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले स्थायी कमिटी सदस्यहरुलाई ‘भाइरस ब्लकर डिसइन्फेक्सन कार्ड’ बाँडेका थिए । यसलाई नेकपा नेताहरुले कोरोना जन्तर भन्दै घाँटीमा भिरेर हिँडेका थिए । तर स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो भाइरसले कोरोना संक्रमणबाट नजोगाउने प्रष्ट पारेको छ ।
के हो कार्ड ?
‘भाइरस ब्लकर डिसइन्फेक्सन कार्ड’ पोर्टेबल एयर प्युरिफायर हो । चार ग्राम तौल हुने यस्तो कार्डमा क्लोरिन डाइअक्साइड प्रोड्युसर, ग्यास स्टेइन रिलिज एजेन्ट, ब्याम्बो कार्बनजस्ता रसायनहरू राखिएको हुन्छ । यसले भाइरस नष्ट गर्ने दाबी छ ।
यस्ता कार्ड निर्माताहरूले ३० देखि ६० दिनसम्म ५० सेन्टिमिटर वरपरसम्म निकै कम मात्रामा (लो कन्सन्ट्रेसन) क्लोरिन डाइअक्साइड हावामा छाड्दै त्यहाँ भएका भाइरस ब्याक्टेरिया, धुवाँ वा प्रदूषण हटाउने दाबी गरेका छन्। तर यो कार्डमाथि प्रश्न पनि उठेको छ ।
चिनियाँ समाचार संस्था सीजीटीएनमा प्रकाशित समचारअनुसार यसको प्रयोग कतिपय अवस्थामा निकै हानिकारक हुन सक्छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार छोटो समयमा नै जीवाणुमुक्त गर्न उच्च मात्रामा क्लोरिन डाइअक्साइडको प्रयोग गर्दा श्वासप्रश्वासमा असर पर्न सक्छ ।
तर यो कार्डको पक्षमा मत जाहेर गर्ने कतिपय विशेषज्ञहरूले भने कार्डमा क्लोरिन डाइअक्साइडको मात्रा थोरै हुने र यसको असर पनि कम पर्ने बताएका छन् । यद्यपि कार्ड फुट्यो भने क्लोराइट निस्किन्छ, जुन मानिसको छालामा पर्‍यो भने जल्न सक्छ । साथै, श्वासप्रश्वासमा पनि समस्या हुन सक्छ ।
जापान, अमेरिकालगायतका मुलुकमा पनि यस्तो कार्ड प्रयोग नगर्न सुझाव दिइएको छ। एक अनुसन्धानले क्लोरिन डाइअक्साइड अनुमानका भरमा प्रयोग भइरहेको र यसले जीवाणुहरू मार्न सक्ने पुष्टि नभएको उल्लेख छ । बरु मानिसको फोक्सोमा असर परेको देखिएको छ।